တရုတ်နိုင်ငံ ဟဲနန်ပြည်နယ်၌ ရွှေတွင်းကြီးရှာဖွေတွေ့ရှိ - Xinhua News Agency
ကျန်းကျိုး ၊ အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ဟဲနန်ပြည်နယ်၌ ကနဦးခန့်မှန်းခြေ ရွှေ ၃၁ ဒသမ ၅၅ တန် ထွက်ရှိမည့် ကြီးမားသည့် ရွှေတွင်းတစ်တွင်းအား ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။အဆိုပါရွှေတွင်းသည် Tongbai ကောင်တီအတွင်းရှိ Zhuzhuang မြို့နယ်၌ တည်ရှိကြောင်း ဘူမိဗေဒ ၊ ဓာတ်သတ္တုရှာဖွေရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ခရိုင်ဗျူရိုထံမှ သိရသည်။
ရွှေတွင်း၌ ခန့်မှန်းရွှေထွက်ရှိမှုသည် ထပ်မံတူးဖော်မှုများ ပြုလုပ်ပြီးနောက် ယခုနှစ်ကုန်တွင် တန် ၅၀ ကျော်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ဆယ်စုနှစ်များစွာ ဟဲနန်ပြည်နယ်သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဒုတိယအကြီးဆုံး ရွှေထွက်ရှိသည့် ဒေသအဖြစ် တည်ရှိနေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ဒေသတွင်း ဘူမိဗေဒ နှင့် ဓာတ်သတ္တုရှာဖွေရေး တာဝန်ရှိသူများသည် Tongbai ကောင်တီအတွင်း ကြီးမားသည့် ရွှေတွင်းတစ်တွင်းအား ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ရွှေ ၁၀၅ တန် ထွက်ရှိမှု နှင့်အတူ အဆိုပါရွှေတွင်းသည် ထုတ်လုပ်နိုင်မှုအလားအလာ နှစ် ၈၀ ရှိကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
China’s Henan discovers large gold mine
ZHENGZHOU, Oct. 27 (Xinhua) — A large gold mine with an initially estimated gold reserve of 31.55 tonnes has been discovered in central China’s Henan Province.
In 2016, local geology and mineral exploration authorities discoveredalarge gold mine also in Tongbai County. Withagold reserve of about 105 tonnes, the mine has 80 years of development potential. Enditem
Photo – An unmanned excavator is operated by remote control at Sandaozhuang Mine of China Molybdenum Co., Ltd. in Luanchuan County, central China’s Henan Province, Aug. 12, 2020. Since 2019, 5G technology has been applied to production at Sandaozhuang Mine. With its high speed and low latency, the technology enables workers to remotely control vehicles and machineries at the mine with precision. (Xinhua/Li Jianan)